Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Qatar oo wada kulmay - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan Magaalada Doxa ee Caasimadda dalka Qatar ayaa la kulmay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dowladda Qatar ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman.
Kulanka u dhexeeyay labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan, waxaana qeyb ka ahaa xoojinta xiriirka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo jimcihii u ambabaxay dalka Qatar ayaa wax war ah laga helin safarkiisa, mana jirin wararkii looga bartay oo Xafiiskiisa Warfaafinta ka soo saari jiray safaradiisa dibadda.
Safarka Ra’iisul Wasaare Kheyre ku aaday dalka Qatar ayaa waxaa ku wehliyay Guddoomiyaha Bangiga Dhexe.
Madaxda dowladda, Wasiirada, Mas’uuliyiinta kale sida Taliyaha NISA ayaa safarada ugu badan ku taga dalka Qatar, oo ah dalka ugu weyn ee taageerada dhaqaale ee tooska siiya dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleBankiga aduunka oo 40 million ugu ansixiyay Soomaaliya.
Next articleMadaxweyne Saciid Deni oo qaadacay Shirkii DFS iyo M/Goboleedyada
Maamulka Gobolka Hiiraan oo ka hadlay Shacabka la dilay
Soomaaliya iyo Turkiga oo gaaray heshiis muhiim ah
Duqeyn Cusub oo lagu dilay Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Sarkaalkii Amray in Ciidanka jooga Ereteriya in ay ka qeyb galaan dagaalka TPLF oo la ogaaday